Na -eteta na 1am, 2am, 3am, 4am, 5am - Ọnọdụ Ime Mmụọ
otu esi etinye igbe ozi na iphone
ihuenyo mmetụ iphone 6 anaghị anabata
na -adọpụ ikpuru si na nrọ anụ
ekwentị m agaghị ekwe ka m budata ios 10
ekwentị m na -emechi ngwa
Na -eteta n'otu oge kwa abalị pụtara mmụọ. Enwere ndị meridian iri na anọ na -agafe ahụ , 12 n'ime ha kwekọrọ na elekere 24.
Nke ahụ pụtara na enwere awa 2 kwa ụbọchị nke otu onye meridian - nke na -agafe akụkụ ụfọdụ nke ahụ gị - na -abụ isi.
Ndị Meridians nwere njikọ na akụkụ ahụ na usoro anụ ahụ, yana site na, mmetụta, na ahụmịhe. N'ụzọ bụ isi, awa ị na -eteta nwere ike ịgwa gị nke meridian na -enwe ọgba aghara.
Oge abalị na -ekpebi nke ukwuu ihe na -eme mgbe ị tetara. Ọ dịkwa mkpa ịtụle ugboro ole ị na -eteta n'abalị. Ọ bụrụ na ị na -eteta n'etiti elekere atọ nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede ọ bụla, ọ nwere ike ịpụta na ị na -agabiga ule edemede ime mmụọ .
Nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ị naghị eteta n'abalị ọzọ ma ọ nweghị ihe doro anya (dịka ịga ụlọ ịsa ahụ) maka ihe mere i jiri teta n'ụra. Mme N̄ke 6:22.
Ebumnuche ime mmụọ nke iteta n'ụra n'elekere 1 nke ụtụtụ
Nkịtị: Ị nwere ike na -enwe nsogbu gbasara mgbasa (ọkachasị, obi gị) ma ọ bụ eriri afọ gị.
Uche: Ị na -agbasi mbọ ike ịhazi ọnọdụ gị na ndụ, ma ọ bụ nwee ahụ iru ala. Ị na -echegbu onwe gị gbasara otu ị ga -esi aga n'ihu, ọ nwere ike na -alụ ọgụ na nsogbu gbasara ọdịdị gị ma ọ bụ ibu gị.
Ime mmụọ: Ike dị gị mkpa. Ị na -enye ihe karịrị ihe ị na -enweta, ọ na -agwụkwa gị ike. Ọ nwere ike bụrụ okwu gbasara ịghara ịnabata (okwu mgbasa ozi na -emetụtakarị iguzogide nrugharị) mana ọ nwekwara ike bụrụ n'ihi na ị maghị otu esi eme onwe gị obi ụtọ, yabụ na ị dabere n'echiche ebumnuche ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nkwado mmadụ ime ya maka gị.
Ebumnuche ime mmụọ nke iteta n'ụra n'elekere abụọ nke ụtụtụ
Nkịtị: Ị nwere ike na -enwe nsogbu na mgbaze, metụtara ma ọ bụ eriri afọ gị ma ọ bụ imeju gị. Ị nwere ike na -eri nri ma ọ bụ na -a drinkingụbiga mmanya ókè ma ọ bụ na -adịcha obere.
Uche: Ọ bụrụ na ị na-eteta n'oge a, ọ na-abụkarị maka akpa ume na-edozighị edozi nke ị tụtụtachara n'isi ruo etiti nwata. Mgbe ị bụ nwata, enweghị ike ịhazi ihe ha pụtara pụtara na ị ga -ezere ma ọ bụ guzogide ọnọdụ ha bilitere. Ruo taa, ọ na -emetụta gị.
Ime mmụọ: Ịkwesịrị iwepụ nkwenkwe ochie ndị a, na -amachi, eketa na echiche ị nwere gbasara onwe gị nke ị tụtụpụtara tupu ịmara ihe na -eme. Ịkwesịrị ịmụtacha etu esi agbari nri n'ụzọ nkịtị, wee hazie ma mụọ nkuzi enyere nke ọma. Aịsaịa 52: 1.
Ebumnuche ime mmụọ nke iteta n'ụra n'elekere atọ nke ụtụtụ
Gịnị kpatara 3am ji dị mkpa na ụwa ime mmụọ?.
Na -eteta n'elekere atọ nke ụtụtụ, Nọmba 3 na -ejikọ ị ya na ìgwè ndị mmụọ ozi , onye na -eziga mgbama na ị zuru oke iziga ịhụnanya na ịdị mma niile ị nwere n'ime ahụ gị; jikọọ n'echiche gị nke ịbụ mmadụ na imeso ndị mmadụ ibe gị ihe.
Mgbe ị na -agbakwụnye ọnụọgụ a (3 + 3 + 3) ọnụ ahịa ya bụ 9, ọnụọgụ na -egosi na ihe dị ebube ka ga -abịa nakwa na ọ gaghị abara gị uru, kamakwa ndị nọ gị nso.
Ọdịdị nke 333 ugboro ugboro na ndụ gị pụtara na ị dịla njikere ịgabiga ókè gị ma kwatuo ihe mgbochi ndị ahụ na -egbochi gị itolite ihe ị kwesịrị. Na mgbakwunye, ejikọtara ya na chi ọma, yabụ na ọ bụ oge dị mma iji mezuo ihe niile ị lụrụ ọgụ.
Nkịtị: Ị nwere ike ịnwe nsogbu na akpa ume gị. Ọ nwere ike bụrụ naanị enweghị ike iku ume nke ọma na izu ike.
Uche: Ị chọrọ nduzi na ntụzịaka. Agbanyeghị na ị na -amalite inwe mkpalite na ndụ gị, ọtụtụ ihe ka bụ ihe ọhụrụ nye gị, yabụ ị dịkwa n'ụzọ nkịtị na -eteta n'oge awa ime mmụọ (ọ bụchaghị ihe ọjọọ) ka ị nwetakwuo ozi ị chọrọ.
Ime mmụọ: Nyere na elekere atọ nke ụtụtụ bụ oge ihe mkpuchi dị n'etiti akụkụ kachasị dị ala, ọ ga -ekwe omume na ume na -anwa ịgwa gị okwu (ndị hụrụ n'anya gafere, ntuziaka, wdg). Ọ nwekwara ike bụrụ na n'ihi na ị na -enwe mmetụta nke ike dị aghụghọ, ahụ gị na -eteta onwe ya mgbe enwere ihe na -eme n'ụwa nkịtị. Mụrụ anya dee ozi ọ bụla ị nwetara ma ọ bụ echiche na -etolite n'isi gị n'oge a.
Ebumnuche ime mmụọ nke iteta n'ụra n'elekere anọ nke ụtụtụ.
Nkịtị: Ị nwere ike ịnwe nsogbu na eriri afo gị, ma ọ bụ ajirija. Nke a bụ oge oke ahụ gị na -adịkarị ala, yabụ na ọ ga -ekwe omume na ị na -ekpo oke ọkụ ma ọ bụ na -ajụ oke oyi.
Uche: Ị nwere ike na-agba oke ọkụ ma ọ bụ jụọ oyi na ndụ nke gị, na-enwe mmetụta otu afọ juru gị ma emesịa hapụ inwe obi abụọ. Tụkwasị na nke a bụ akụkụ nke usoro a, ọ ga -enyere gị aka ịghọta nguzozi na duality.
Ime mmụọ: Ị nọ n'oge ịrịgoro, na -ebili ma na -eme nnukwu mgbanwe na ndụ gị. Ka ị na -ewebata ihe ọhụrụ, ị ga -arụ ọrụ n'ịdị njikere ịhapụ ihe ochie.
Ebumnuche ime mmụọ nke iteta n'ụra n'elekere ise nke ụtụtụ
na -eteta n'elekere ise nke ụtụtụ nke mmụọ .
Nkịtị: Ị nwere ike na -enwe nsogbu na nnukwu eriri afọ gị, ma ọ bụ na nri na nri.
Uche: O nwere ike ị gaghị ekwenye na ị kwesịrị inweta ịhụnanya nke ndị ọzọ ma ọ bụ ọdịmma nke gị. O yikarịrị ka ị na-enwe nkụda mmụọ nke ukwuu nke na ị gaghị anabata ihe niile dị ịtụnanya ị rụpụtara n'onwe gị. Ịkwesịrị ka ubi gị nye gị nri, dị ka a pụrụ isi kwuo ya.
Ime mmụọ: Ị bụ na-eru ebe kacha elu na ndụ gị, nke ị ga-emecha bụrụ onye na-akwado onwe ya, nke dị mma, na-eme nke ọma. Ị ga -arụ ọrụ na ikwe ka ọ joyụ nke ime gị pụta n'ime gị, ikwe ka nri na mmekọrịta na -enye gị nri zuru oke, ma nọrọkwa oge a dị egwu na ndụ gị.
Ị teta n'agbata elekere atọ nke ụtụtụ ruo elekere ise nke ụtụtụ nwere ike bụrụ akara nke edemede ime mmụọ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na -alụ ọgụ n'okwu ndị ae kwuru n'elu, ọ bụghị onye ọ bụla na -ahụ ihe mgbaàmà nke edemede dị ka a na -akpọtekarị ya n'ụra n'oge awa adịghị mma.
Mgbaàmà ndị ọzọ gụnyere:
1. Ịga nnukwu mgbanwe ndụ.
2. Inwe ahụmịhe mmetụta uche siri ike, ọ na -abụkarị ebe ọ bụla.
3. Ịjụ eziokwu na ihe ị nwere ike n'ezie na ndụ.
4. Inwe mmezu siri ike gbasara ọdịdị ịdị adị yana onwe gị.
5. Ịhụ okwu ochie site na nwata na -etopụta ọzọ, ọnọdụ ndị yiri ya na -emegharị ka ị nwee ike ịzaghachi n'ụzọ dị iche n'oge a.
6. Ụbara ụbụrụ na -agba, ma ọ bụ enweghị nkụda mmụọ dị nro.
7. Ịhụ mkpa ọ dị ikewapụ onwe gị.
8. Ịmara nke ọma na ọ dị mkpa ka ị gbakọta ọnụ na ndụ gị, na ịchọrọ ime nnukwu mgbanwe.
9. Na -enwe ahụ erughị ala ma kpalitere ya site na ọnọdụ enweghị usoro nke ị na -enweghị ike ịhapụ.
10. Ịghọta na ọ bụ naanị gị ka ọ dịịrị ịmepụta ndụ ị chọrọ ibi.
N'ezie, ihe ndị ọzọ nwere ike na -egwu egwu n'oge ndụ gị, dị ka mmekọrịta na -akpaghasị, ị ofụbiga mmanya ókè, ịrahụ ụra nke ukwuu n'ụbọchị, inwe nchekasị ma ọ bụ ịda mbà n'obi, ma ọ bụ ihe mgbaàmà ndị ọzọ.
Ihe kachasị mkpa bụ na ị ga -atụkwasị obi n'ihe ọ bụla chere na ọ kacha dị gị mma. Dịka ị kwesịrị ịmara mgbe ị na -eteta n'oge na -adịghị mma, ghọtakwa mgbe ị kwụsịrị: ọ pụtara na akụkụ ụfọdụ nke ndụ gị nke edozighị na mbụ ka a gwọrọ, ma ọ bụ gbakee.
Kedu ihe ị kwesịrị ime n'oge edemede ime mmụọ a?
Ọ bụ ezie na ọ na -adị mma mgbe niile ịmara na ị na -eteta n'ụzọ ime mmụọ, iteta n'ụra kwa abalị nwere ike ibute ahụ gị. Mgbe ụbọchị ole na ole nke ịkpọte n'ụra abalị a, anya gị na -adị arọ, ọ ga -esiri gị ike ịmụrụ anya n'ebe ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ihi ụra ọzọ, ịkwesịrị ịza oku eteta wee malite iru ezigbo ike ime mmụọ gị.
Oge ọzọ ị tetara, nọrọ n'azụ gị. Were opekata mpe ogologo ume atọ miri emi. Mgbe ahụ, nwee mmetụta ka ume na -erugharị n'ahụ gị. Nabata ume ọhụrụ a n'ihi na ịchọrọ ya ime mgbanwe yana iru ike gị kacha elu.
Ugbu a, mechie anya gị wee zuru ike. Gbalịa ịhụ anya site n'uche nke uche gị ma gee ntị n'ihe pụtara. Ị nwere ike ịhụ mkpụrụedemede, ọnụọgụgụ, okwu ma ọ bụ akara na mbụ. Ihe ọ bụla ị hụrụ, jide n'aka na ị chetara ya. Ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa, dee ọhụụ a n'akwụkwọ nrọ ka ị nwee ike icheta ya ngwa ngwa mgbe ị tetara n'ụtụtụ echi ya.
Tinye uche n'ozi ị nwetara. Mee mkpebi uche iji rụọ ọrụ na ozi a mgbe ị tetara n'ụtụtụ echi. Ugbu a, ị dịla njikere ịlakpu ụra. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịda n'ụra ngwa ngwa, mgbe ahụ ọ pụtara na uche gị amatala ozi nke ọma.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịrahụ ụra ozugbo, ọ pụtara na enwere nsogbu na ozi ahụ. Gafee usoro ndị a niile ọzọ. Mgbe ị tetara n'ụtụtụ echi ya, lee akara ị natara wee gbalịa ịkọwa ozi ahụ. Nke a nwere ike iwe oge, yabụ nwee ndidi. Mgbe ụfọdụ, ntụgharị uche na -enyere gị aka imeghe uche gị ka ị nwee ike ịghọta ozi a na -ezitere gị n'ezie. Ndị Rom 13:11.
Ozugbo ịmere nke a n'ụzọ ziri ezi, ị ga -enwe ike ihi ụra nke ọma ọzọ. Mgbe ị rutere n'ụzọ ziri ezi, ọ nweghịzi ihe kpatara mpaghara ime mmụọ ga -eji eteta gị kwa abalị. Ọ bụrụ na ị na -eteta ugboro ugboro, mgbe ahụ ọ bụ ihe ịrịba ama na ọ dị mkpa ịrụkwu ọrụ. Nwee ndidi n'ihi na n'ikpeazụ ị ga -achọpụta ozi ekwesịrị ka ị nweta.
Ihe Akwụkwọ Nsọ pụtara iteta n'ụra n'elekere atọ nke ụtụtụ
Ihe nkiri sinima na ihe nkiri telivishọn na -egosi oge awa ekwensu. Dabere na isi mmalite, ha nwere ike na -ekwu maka oge dị n'agbata elekere atọ nke ụtụtụ ruo elekere anọ nke ụtụtụ ma ọ bụ awa n'etiti etiti abalị na elekere atọ nke ụtụtụ N'ọnọdụ ọ bụla, ọtụtụ na -ekwu na ekwensu kacha ike n'oge a.
Echiche ahụ yiri ka ọ sitere na ịmara na Setan hụrụ n'anya ịkwa Chineke emo.
Oziọma Matiu, Mak na Luk na -agwa anyị na Jizọs nwụrụ n'oge awa nke itoolu. Dika ngụkọ oge a, ọ ga -abụ elekere atọ dịka echiche a siri dị, Setan na -atụgharị ihe nnọchianya ahụ dịka echiche ya siri dị wee debe onwe ya elekere atọ, na -akwa Chineke emo.
Ihe ọzọ kpatara oge a ka a na -ele anya dị ka ihe na -adịghị ahụkebe nke ọrụ ndị mmụọ ọjọọ bụ na ọ bụ n'etiti abalị; anyanwụ anọọla kemgbe, ọ gaghịkwa awa awa ole na ole ọzọ.
Akwụkwọ Nsọ na -ezo aka ugboro ugboro na abalị na ọchịchịrị dị ka oge nke mmehie. A chịkọtara echiche a n'ụzọ zuru oke na Oziọma Jọn: Nke a bụ ikpe: ìhè bịara n'ụwa, ma mmadụ họọrọ ọchịchịrị karịa ìhè, n'ihi na ọrụ ha dị njọ. Onye ọ bụla nke na-eme ihe ọjọọ kpọrọ ìhè ahụ asị, ọ naghịkwa abịaru ya nso, ka a ghara ikpughe ọrụ ya (3,19-20).
Ọzọkwa, Judas raara Jizọs nye n'abalị (mgbe ụfọdụ a na -eche na ọ bụ etiti abalị) na Pita gọnahụrụ Jizọs tupu oke ọkpa ahụ amalite (ihe dị ka elekere isii nke ụtụtụ). Nke a ga -eche na ikpe a na -ekpe Jizọs n'ihu Sanhedrin mere n'oge awa ekwensu.
Enwekwara obere usoro ihe ọmụmụ na-arụ ọrụ ebe a, ebe elekere atọ nke ụtụtụ na-aka akara ụra abalị miri emi na okirikiri ndị okenye na-ehi ụra. Teta ma ọ bụ teta n'ụra n'oge ahụ nwere ike mebie rhythms circadian anyị wee mee ka anyị nwee nkụda mmụọ ma ọ bụ nwee nrụgide.
Ọtụtụ na -ekpe ekpere nke onwe ha ma ọ bụrụ na ha eteta n'elekere atọ nke ụtụtụ. Mana cheta na n'agbanyeghị oge ụbọchị, Chineke na -adị ike karịa Setan mgbe niile, ọ na -anọgidekwa bụrụ ìhè nke ụwa nke ga -agbawa ọchịchịrị ọ bụla.